MIUI 8 ga-enweta ọnọdụ ọtụtụ windo na nwelite n'ọdịnihu | Gam akporosis
MIUI 8 ga-eweta ọnọdụ ọtụtụ windo maka ịba ụba
Nyaahụ anyị mụtara na Google agaghị eweta na ndabara na multi-window na ngwaọrụ Nexus malitere afọ a na Android N. Nke a apụtaghị na enweghị ike iji ya, ebe ọ dị ma ọ bụrụ ụfọdụ ndị nrụpụta chọrọ iji ya Maka nhazi ọdịnala ya, naanị ihe Google anaghị ahụ atụmatụ a dị njikere iji gosi ya dịka otu n'ime ndị isi dịka ọ na-eme ọtụtụ ndị ọzọ.
Omenala oyi akwa MIUI 8 ekpughere ọnwa gara aga na na mbido ọnwa a ụdị beta E nwere ROM maka nbudata. MIUI 8 nwere oke nlezianya iji chepụta ka ọ na-eme na nke ọ bụla n'ime Xiaomi ọnụ, isi ihe ịga nke ọma ya na nke ọ metụtara. Ọ bụrụ na anyị ekwuola maka njirimara na mgbanwe nke MIUI 8, ugbu a, anyị na-a attentiona ntị na otu n'ime isi atụmatụ ya nke ga-abata na ROM na nke anyị na-amaghị.
Anyị ahụla atụmatụ a ugbu a ruo ogologo oge na Samsung Galaxy Note na Galaxy S so nye ike ịrụ ọrụ ọtụtụ na gam akporo, ọ bụ ezie na anyị nwere mmetụta mgbe niile na ọ na-eri oriri batrị oke mgbe anyị kewara ihuenyo na abụọ iji nwee ngwa izi ozi n'otu akụkụ, ebe nke ọzọ anyị na-ede ụfọdụ ederede banyere ọrụ maka mahadum.
Njirimara a dị na MIUI 8 ma na-enye ohere ikesa ihuenyo na atụmatụ ahụ multi-window maka ịme ọtụtụ ihe. Zọ o si eme ya bụ ihe yiri ya ka e wee wuchaa ọrụ abụọ n'otu oge. Ọ bụ kpọmkwem arụmọrụ nke na-agaghị adị na ndabara na ngwaọrụ Nexus.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe ọhụụ a bụ na ọ gaghị abụ akụkụ nke mbụ ọha mbipute nke MIUI 8, ma ọ ga-abata na mmelite maka ọnwa ole na ole sochirinụ nke ROM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MIUI 8 ga-eweta ọnọdụ ọtụtụ windo maka ịba ụba
Ihe ọhụrụ Xiaomi Mi band 2, na omimi [vidiyo]
[APK] Google Fit ka emelitere site na ndegharị n'ime imewe ahụ, ebumnuche ka mma yana wijetị nwere ike ịhazi